Mampifandray an'i Caracas avy any Roma ny orinasam-pitondrana Estelar taorian'ny tsy naha-17 taona azy
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mampifandray an'i Caracas avy any Roma ny orinasam-pitondrana Estelar taorian'ny tsy naha-17 taona azy
Ny mpitatitra Venezoeliana, Estelar Latinoamérica, manana foibe any Caracas, dia nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny zotra Caracas-Rome-Caracas.
Ny mpitatitra Venezoeliana, Estelar Latinoamérica, manana foibe any Caracas, dia nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny zotra Caracas-Rome-Caracas. Aorian'ny 17 taona tsy misy sidina mivantana, dia hifandray amin'ny renivohitr'i Venezoela indray mandeha isan-kerinandro i Zoma amin'ny 12:40, raha avy any Caracas kosa dia hihazo an'i Roma ny Alakamisy amin'ny 6:20 hariva. Ny fanantenan'ny orinasa hahomby amin'ny fampitomboana matetika.
Ny sidina dia hiasan'ny Airbus A340-313 manana fahaiza-manao 267: 12 amin'ny kilasy voalohany, 42 amin'ny kilasy fandraharahana, ary 213 amin'ny kilasy fizahan-tany. Ny ora sidina dia 10 ora sy 30 minitra, ka izy no sidina lava indrindra alefan'ny kaompaniam-pitaterana.
"Miaraka amin'ny famerenana ny serivisy amin'ny seranam-piaramanidina ho any Roma, izao dia manolotra tanjona fito ho an'ny firenena iraisam-pirenena isika, ka ny 7 dia ho any Eropa," hoy i Boris Serrano, filohan'ny mpitatitra, ary nanampy hoe, "Ity dia vokatry ny ezaka lehibe dia manao ekipa tsara sy voaomana mba hanolotra fifandraisana marobe atsy ho atsy miaraka amin'ny tanjona hamaly ny filan'ny mpandeha. "
Ny zotra Caracas-Rome vaovao dia mahaliana ny mpizahatany, ny mpandeha raharaham-barotra, ary ny vondrom-piarahamonina Italiana-Venezoeliana izay lehibe indrindra amin'ireo vondrom-piarahamonina vahiny ary manana fotoana tsara hampiroboroboana ny toerana italiana. "Tsena tena lehibe ho anay io," hoy hatrany i Serrano, "Ary matoky izahay fa ny ezaka ataontsika ao Aerolíneas Estelar hanatsara ny fifandraisanay dia handray soa amin'ny lafiny raharaham-pirenena sy ny fifandraisan'ny fianakaviana eo amin'ny roa tonta."
“Ny tanjonay ho an'ny taona 2019: làlana fahatelo mankany Eropa sy any Amerika atsimo sy afovoany. Nanendry GSA - Tal Aviation - izahay hanompo ny tsenan'ny Italiana ho an'ny famandrihana ary ny tapakila Aerolíneas Estelar, "hoy i Boris Serrano namarana.
Ny fizahan-tany any Kanada dia afaka mitrandraka amin'ny rongony
Xavier the Mountain Goat dia nankany amin'ny Frontier Airlines